मलेशिया सुरक्षा गार्ड को नया डिमाण्ड (मागपत्र ) सुची ! - jagritikhabar.com
मलेशिया सुरक्षा गार्ड को नया डिमाण्ड (मागपत्र ) सुची !
न्युनतम तलब RM १५०० दिने १२ मलेसियन सुरक्षा गार्ड कम्पनी र RM १२०० दिने १४ मलेसियन सुरक्षा गार्ड कम्पनी को नया मागपत्र सुची ।
कति हुन्छ तलब ?
सिंगापुरमा काम गर्न जान पाउनु धेरैको सपना हो ।राम्रो तलब, राम्रो सेवा सुबिधा, इज्जत र घर फर्किदा दिइने सुबिधा समेत राम्रो छ । सरदर नेपालीले सिंगापुरमा २ लाख रुपैयाँ मासिक कमाउने गर्छन् । कामको प्राकृति हेरि धेरै तथा थोरै हुन सक्नेछ ।
कसरी जाने ?
सिंगापुर जान नेपालबाट सहज छैन,धेरै कम मात्रामा बिज्ञापन खुल्छ त्यसैमा लागत १०-१२ लाख भन्दा बढी लैजाने गर्छन् । त्यसैले धेरै नेपालीहरु मलेसियामा कामदार भिसामा जाने र त्यहाका एजेन्ट वा मेनपावर एजेन्सीहरु संगको सहकार्यमा सिंगापुर जाने गर्छन् ।
यसरि जादा त्यहाँका मेनपावर एजेन्सीहरुले करिब5हजार रिङ्गेट सम्म लैजाने बुझिएको छ । तर यो सुचनाको आधारमै अनाहकमा पैसा कसैलाई पनि नतिर्न र राम्रो संग नबुझेसम्म कसैलाई पैसा नबुझाउनु होन अनुरोध गर्दछौं ।
वैदेशिक श्रम विभागले निम्न जानकारी प्रदान गर्दछ
तपाईंले कम्पनीबाट व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि तपाईंको जम्मा गरिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडो भाउचर सङ्कलन गर्नुहोस्। यहाँ रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी नोट गर्न निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा तपाई सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
कागजातमा सूचीबद्ध रकम भन्दा बढी नदिनुहोस्। तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ। विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलको सट्टा नेपाली विमानस्थलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईंसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाइँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।
अन्तर्वार्ताः काठमाडौँ लाई यस्तो अवस्था पुराउछु : नवनिर्वाचित प्रमुख साह
१४ जेठ, काठमाडौँ । मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ६१...
दाङका २४ वर्षीय युवकको दुबईमा मृ’त्यु
३० जेठ, दाङ। दाङका एक ब्यक्तीको दुबईमा मृत्यु भएको छ । बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा...
मलेसियामा नेपालीकै छुरा प्रहारबाट पाँचथरका युवाले ज्यान गुमाए…
मलेसियामा एकै परिवारका तीनजना, तोडफोड गर्ने गिरोह पक्राउ
साउदी अरब सडक दुर्घटनामा परी एक नेपाली युवाको मृत्यु
नक्कली भिसा बोकेर अमेरिका हिँडेका १५ नेपाली स्पेनमा पक्राउ
५ असार, काठमाडौं । भारतको बिहारको राजधानी पटनाबाट दिल्लीका लागि उडेको स्पाइसजेटको विमानमा आगो...